Fialana kely amin’ny MAHAZATRA | Grandir à Antsirabe
Fialana kely amin'ny Mahazatra : vakansy
Haingana fa maika ôôô …
Voa maraina dita efa vonombonona ery ireto ankizy, natao haingana ireo raharaha tokony ho vitana : manadio trano, mansa vilia sns. Tamin’ny 8ora sy sasany teo ho eo vita ny kenokenona rehetra, miandry ny fahatongavan’ny zoky rehetra amin’izay!
Mailaka ery ny rehetra nitaona ireo entana nakao anaty fiara: zava-maneno sy fitaovana hanaovana kilalao, maika maika fa efa te ho tonga.
Tonga ny tamin’ny 9 maraina, nanainga ny fiara. Kotaba sy orakoraka ery tao anaty fiara teny an-dalana : andeha hilomano eee!! hoy ny antsoantson’izy rehetra.
lomano, lomano foana, lomano hatrany!
Avy hatrany dia lomano ary ny nanombohana ny fitsangatsanganana. Nesorina ny mavesatra rehetra dia napetaka ny ankanjo fitondra milomano. Dia hafaliana foana ny mijoboka anaty rano e (mafana rahateo). Toy ny tamin’ny volana aprily lasa teo ihany “ganagana mahita rano”, tsy ankiala fa roso foana! Nahazo aina daholo na ny kely na ny lehibe.
Nisy fisotroana ranom-boakazo sy fizarana mofo mamy kely vetivety teo amin’ny tamin’ny 11 teo dia niverina tanaty rano indray:”ndaho indray zalaha ahhhh!”
Nandritra ny tapak’andro maraina manontolo dia tsy nahatsiaro noana mihintsy ireto ankizy. Ho an’ireo efa mahay milomano, izay maro tokoa, dia mampianatra ireo zandry mbola votsavotsa. Taratry ny fahaizana miaraka miasa.
Inona indray ny tohiny…
Sakafo atoandro anio : petit pois sy soasisy, lasary voatabia, tsindrin-tsakafo akondro. Nazotoa homana avokoa aloha ny rehetra tsy lainga e, na ireny lomano 4 ora be ireny fotsiny aza. Nipetraka ambony latabatra tsara avokoa, nahazo toerana tsara.
Rehefa vita ny sakafo atoandro teo an-toerana ihany, dia raikitra indray ny dihy sy ny deboka aponga.
Anjaran’ny mpanbe teto ny nandihy, ny ankizy kosa mitehaka sy mihira. Sady fanitsanana kely ihany koa fa sao manevika eny am-pilalaovana.
Nindrana tokontany malalaka tao amindry Masera Fille de Marie Auxiliatrice Betafo ny tolak’andro fa hilalao. Notsinjarana mazava ny kilalao rehetra, izay efa nomanin’ny ekipa rehetra ny omaly.
Dia nilalao koa!
Kilalao voalohany : mampianatra ireo ankizy hanana fifantohana
Tsipy anneaux : nasaina nanimpy anneaux 5 ao anaty tavohangy ny vondrona tsirairay avy ; mila atao tafiditra ao anatin’ny lohana tavohangy avy ireo anneau, raha mahatafiditra anneau iray izy ireo dia mahazo isa iray raha maha tafiditra azy dimy dia mahazo isa 5.
Kilalao faharoa : Mampianatra ireo ankizy hiray hina
Chasse au trésor biscuits : ankizy iray ao anaty ny tarika no mitady ilay biscuit ka tapenana ny masony dia ankizy hafa no manondro izay tokony aleha makany amin’ilay « harena miafina ». Arakaraka ny isan’ny biscuit hita no isan’ny naoty azo, ao anatin’ny fotoana voafetra anefa. Hita fa tena misy miray hina ireo ankizy ka nahazo biscuit be dia be.
Kilalao fahatelo : nianatra nanisa
famenona isa tsy mitovy: misy isa 1 hatramin’ny 10 milahatra eo, nakorotana ny filaharany ka anjaran’ny ankizy no mamerina sy mandridra izany, no sady mameno izay isa tsy eo. Izay mahavita ihany moa mahazo isa.
Kilalao fahaefatra: manampy ny ankizy hananana fahavitrihana sy hahay hanaraka ireo fitsipika efa napetraka.
Tatitra kanety eo ambony sotro : nasaina nilahatra ny vondrona roa ka izay mahatatitra ilay kanety eo ambony sotro na izay mahatonga lavitra indrindra no mahazo isa. Tsy azo kitihina amin’ny tanana ilay sotro fa taterina amin’ny vava ka raha latsaka ilay kanety eo amboniny dia miverina any amin’ny voalohany indray. Mila mahay mitandrina be izay tsy izy!
Kilalao fahadimy: fampianarana azy ireo hiombina sy hiara-hiasa
Dessin collectif : ity ny lalao farany natao, misy sary telo eo amin’ny taratasy fotsy iray, sary masoandro dia kitana ary sary fo, ireo sary ireo no nasaina naverin’ireo ekipa tsirairay, amin’ny alalana stylo iray ihany no anaovana ilay sary fa misy tady dimy izay manetsika ilay stylo ahafahana manoratra aminy. Mila mahay maka tahaka tsara ireo ankizy raha te ahazo isa. Nisy tarika iray tena navita nitovy taim’ilay modely ka nahazo isa 5/5.
Nisy avy eo ny fizarana ireo marim-pakasitrahana MARO ho an’ireo nahazo naoty ambony indrindra. Samy nahazo loka avokoa moa ny ekipa rehetra teto.
Namaranana ny tontolo andro dia nisy ady baolina kitra nifanandrinan’ireo ankizy sy ny mpanabe rehetra.
Nalalaka tsara moa ny kianja ka afaka nilalao am-palalahana, tena nafinaritra tokoa NY FIARAHANA, tena FALY IREO ankizy ary tena afampo ny fandraisany anjara ; tsy nisy ny fisalasalana tamin’ireo hetsika maro.
Tonga ary ny tamin’ny 5ora hariva, efa nanomakomana ny fodiana, samy efa reradreraka, mozika malefaka no nadravahana ny fodihana.
Nigadona teto amin’ny Grandir à Antsirabe tamin’ny 6 hariva, samy namonjy ny fodiany avy ny mpanabe ary ireo ankizy kosa nody tao amin’ny Centre d’Hébergement Tomporaire
Feno tokoa iny tontolo andro iny sady nahafinaritra aoka izany, mankasitraka ny ankizy sy ekipa rehetra!
Dia hoy aho hoe : ny masoandro nody no nampalahelo
MG	Seho Ara-dalana #5: Seho ho an’ny Daholobe!
MG	Portrait Tsitoha : Talen’ny fikambanana Gran…